Iindaba -Imicimbi efuna ingqwalaselo xa kusenziwa izinto ezidityanisiweyo koomatshini bokusila be-CNC (amaziko emachiza)
Imiba efuna ingqalelo xa machining izinto edityanisiweyo koomatshini CNC yokugaya (amaziko machining)
1. Zithini izinto ezidityanisiweyo?
Izinto ezidibeneyo zingahlulwa zibe
Izinto zentsimbi kunye nesinyithi esidityanisiweyo, izinto ezingezozentsimbi kunye nezenziwe ngesinyithi, izinto ezingezozentsimbi kunye nezingezizo zesinyithi.
Ngokweempawu zesakhiwo, kukho ezi zinto zilandelayo:
Ifayibha izinto ezidityanisiweyo, izinto zesandwich ezidityanisiweyo, izinto ezifanelekileyo zokutya okuziinkozo, izinto ezihlanganisiweyo ze-hybrid.
Okwesibini, iingxaki iziko machining kufuneka lihlawule ingqalelo xa kusenziwa izinto ezidityanisiweyo.
1.I-Carbon fiber edityanisiweyo inamandla aphakathi okudlala kwaye kulula ukuvelisa i-delamination phantsi kwesenzo sokusika amandla. Ke ngoko, amandla e-axial kufuneka ancitshiswe xa kusombiwa okanye kusikwa. Ukubhola kufuna isantya esiphezulu kunye nefidi encinci. Isantya seziko machining ngokubanzi 3000 ~ 6000 / min, kwaye izinga feed 0.01 ~ 0.04mm / r. I-drill bit kufuneka ibe ngamacandelo amathathu kunye namacala amabini okanye amabini anezicatshulwa. Kungcono ukusebenzisa imela ebukhali. Isiphelo sinokunqumla umaleko wekhabhoni kuqala, kwaye iincakuba ezimbini zilungisa udonga lomngxunya. I-diamond-inlaid drill inobukhali obuhle kwaye inxibe ukumelana. Ukubumba izinto ezidityanisiweyo kunye neetanium alloy sandwich yingxaki enzima. -Ngokuqhelekileyo, kusenziwa ukubhola kwe-carbide eqinileyo ukubamba ngokweeparameter zokusika zeelitoy alloys. Icala le-titanium alloy liqale lomba de kube kugqityiwe, kwaye igrisi iyongezwa ngexesha lokomba. , Nciphisa ukutsha kwezinto ezidityanisiweyo.
2. Isiphumo nangokukrola abagawuli yokugaya ekhethekileyo machining ka-2, 3 iintlobo ezintsha khabhayithi khabhayithi izinto ezingcono kungcono. Zonke zinempawu ezithile eziqhelekileyo: ukuqina okuphezulu, i-angle encinci ye-helix, nokuba yi-0 °, kunye ne-herringbone blade eyenzelwe ngokukodwa inokusebenza. Ukunciphisa amandla okusika yezihlunu iziko machining kunye nokunciphisa delamination, ukusebenza machining kunye nefuthe kuhle kakhulu.
3. Iitshiphusi zezinto ezidityanisiweyo zingumgubo, eziyingozi kwimpilo yabantu. Kufuneka kusetyenziswe izinto zokucoca amandla amakhulu. Ukupholisa amanzi nako kunokunciphisa ungcoliseko lothuli.
4. Izinto zeCarbon fiber edityanisiweyo zizinto ngokubanzi ubukhulu obukhulu, inesimo esimbaxa kunye nolwakhiwo, kwaye ziphezulu kubulukhuni kunye namandla. Kunzima ukuqhubekeka nezinto. Ngexesha lokusika, amandla okusika makhulu kakhulu, kwaye ubushushu obunqamlezileyo abudluliswanga ngokulula. Kwiimeko ezinzima, i-resin iya kutshiswa okanye ithambe, kwaye isixhobo sokunxiba siya kuba sibi. Ke ngoko, isixhobo sisitshixo ekusetyenzisweni kwefayibha yekhabhoni. Indlela yokusika isondele ekugayeni kunokugaya. Isantya sokusika esibekiweyo seziko lokuchwetha lihlala likhulu kune-500m / min, kwaye isicwangciso esinejubane eliphezulu kunye nesondlo esincinci samkelwe. Izixhobo zokucheba i-Edge-ngokubanzi zisebenzisa i-carbide eqinileyo yokusika izixhobo zokugaya, iivili zokugaya ukutya okuziinkozo zedayimani, i-diamond-inlaid cutters yokugaya, kunye ne-diamond-based diamond blade saw blades.